ISLAAM NACAYBKA France Oo Kubadda Cagta Galay & Talaabadii Fadeexada Ahayd Ee Ay Marseille Qaaday Xalay - Gool24.Net
October 29, 2020 Apdihakem Omer Adam
Kooxda ree France ee Marseille ayaa xalay muujisay dhacdo kale oo fadeexad ku ah sumcadeeda ciyaareed kaddib markii ay la fal-gashay arrimo diinaha la xidhiidha oo muddooyinkan ugu dambeeyay ka socday dalkaasi.
Ugu horreynba talaabada ay qaaday Marseille ayaa ahaa inaysan jilibka dhulka dhigin oo aysan taageerin ololaha cunsuriyada lagaga soo horjeedo ee Black Lives Matter “BLM” ee caalamiga ah.
Kaamerooyinka ayaa qabtay xiddigaha Manchester City ee martida u ahaa Marseille oo jilibka dhulka dhigay dhammaantood isla markaana taageeraya dhaq-dhaqaaqay BLM halka ay xiddigaha kooxda martida loo ahaa diideen.
Horyaalada England ayaa ahaa kuwo lagu taageerayay dhaq-dhaqaaqaas tan iyo bishii June iyadoo tababarayaasha, shaqaalaha iyo xiddiguhuba ay ahaayeen kuwo jilibka dhulka saarayay tan iyo bishii June kahor kulamada.
Haddaba, haddii ay midaasi tahay cunsuriyad dhinaca midabka ah intaa waxa dheer in sida ay warbixinuhu sheegayaan ay doorteen xiddigaha Marseille inay daqiiqad u aamusaan oo ay sharfaan Samuel Paty.
Samuel Paty ayaa ahaa macalin taariikhda ah kaas oo toddobaadkii hore lagu dilay dalka France kaddib markii uu af-lagaado ka baahiyay Nabi Muxamad NNKH.
Waxay cadaynaysaa inay wli nacayb qabaan iyagoo khaladka lahaa samuel patty inuu af lagaadeeyo diinta islaamka khalad ayay ku ahay wajibkiisana waa ka mariyay
Nacala tulah macron iyo wixi la halmalaba . Dinta islamka cidkasto fara gashato ilahey facshir iyo halag bow ugu kaseyaa.sidi cadabki lagu harqiyey manyada fircon